ဂျပန်ကဦးဆောင်ပြုလုပ်မည့် Society 5.0(လူမှုကွန်ယက် ၅.၀) ဆိုတာဘာလဲဘယ်လဲ?
၂၀၂၁ ခုနှစ်သည်အိုင်တီနည်းပညာအလျင်အမြန်တိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ ဥရောပကပုံဖော်နေသည့် “စက်မှုလုပ်ငန်း ၄.၀” ၊ စင်ကာပူရဲ့ “စမတ်နိုင်ငံ” ၊ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်စီမံကိန်း “Society 5.0” သို့မဟုတ် လူမှုကွန်ယက် အဆင့်၅ အကြောင်းကိုရှင်းပြချင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် လူမှုပတ်ဝန်းကျင်အသစ်တစ်ခုကိုဖန်တီး၍ လူသားများ၏နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များကို အိုင်တီနည်းပညာဖြင့်အဆင့်မြှင့်တင်ရန် ရည်ရွယ်ထားသည် (ဥပမာ IOT ၊ နေ့စဉ်အချက်အလက်(Big Data) ၊ AI ၊ Robot) ဤသို့ဖန်တီးခြင်းအားဖြင့်လူသားများ၏နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ မြန်ဆန်လာခြင်း၊ ပို၍လွယ်ကူလာခြင်း ဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးများရရှိပီး အနာဂတ်တွင်လဲလူသားများနှင့်ပို၍ကိုက်ညီမည့်နည်းပညာများဝန်ဆောင်မှုအသစ်ကို ဖန်တီးရန်ကြိုးစားနေသည်။
ထို့ထဲတွင် ဂျပန်ကဦးဆောင်ပြုလုပ်သည် လူမှုကွန်ယက်အဆင့် ၅ (ခေါ်) super-smart society လဲ အထူးရေပန်းစားသည်။
လူမှုကွန်ယက် အဆင့် ၁ ကို ကျောက်ခေတ်လူသားဖွံ့ဖြိုးမှုအဆင့်အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး၊ လူမှုကွန်ယက် အဆင့် ၂ ၊ ၃ ကိုမူ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် စက်မှုဖွံ့ဖြိုးမှုအဆင့်အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ အဆင့် ၄ မှာမူ သတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းမှုအဆင့်အဖြစ်ရှုမြင်ခဲ့ပြီးယခုအခါမှာတော့ အဆင့် ၅ သို့ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။
လူသားများ၏နေ့စဉ်အချက်အလက်များကို IOT နည်းပညာဖြင့်ကောက်ယူ၍ AI (ခေါ်) ဥာဏ်ရည်အတုနည်းပညာဖြင့် အသစ်ဖန်တီးပြီး လူသားများအတွက်နေ့စဉ်ဘဝဟာ ပို၍သက်သောင့်သက်သာရှိလာမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ကုန်ထုတ်လုပ်မှု နှင့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများလဲ အသစ်ပြောင်းလဲလာမည်ဟုယုံကြည်သည်။သို့သော် အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့ လိုအပ်ပေးအုံးမည်။
ကျန်းမာရေးနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များအပေါ်ခြေခံ၍ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဟစောင့်ရှောက်မှုစနစ်အသစ်ထွက်ပေါ်လာရေး၊ ဂျပန်နိုင်ငံသည်လဲ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကြွယ်ဝပြီး စီးပွါးရေးနှင့်စက်ရုံများအများအပြားတည်ရှိကာကုန်ကြမ်းဒေတာစုဆောင်းနိုင်မည်ဟုယုံကြည်ထားသည်။
ပုံ၂. စက်မှုလုပ်ငန်းမှသည် စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသို့
ဂျပန်နိုင်ငံသည် စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာတွင် ထိပ်တန်းအဆင့်တွင်ရှိသည်။ အခြေခံစူးစမ်းလေ့လာမှုများပြုလုပ်၍ အချက်အလက်များကိုစုဆောင်းခြင်း နှင့် AI (ခေါ်) ဥာဏ်ရည်အတုနည်းပညာဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတွင် အသစ်များဖန်တီးနိုင်မည်ဟုယုံကြည်သည်။
ကမ္ဘာပြောင်းလဲမှု-လူမှုကွန်ယက် အဆင့် ၅
ထို့အပြင်အသက်ကြီးရင့်သူများပြားလာသည့်နှင့်အမျှ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကုန်ကျစရိတ်များပါတိုးလာပြီး သက်ကြီးရွယ်အိုပြုစုစောင့်ရှောက်မှုကဏ္ဍမှာပါလုပ်သားမလုံလောက်မှု ပြဿနာများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်။
ကျန်းမာရေးဌာနများအနေဖြင့် တစ်ဌာနနှင့်တစ်ဌာန users များရဲ့အချက်အလက်မျှကိုဝေမျှခြင်း၊ ကျန်းမာရေး မှတ်တမ်းများကိုသိမ်းဆည်းခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်ပြုလုပ်ရန်။
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများတွင် ဥာဏ်ရည်အတုနည်းပညာနှင့်စက်ရုပ်နည်းပညာကိုအသုံးပြု၍ ဝန်ဆောင်မှုပေးရန်တို့ဖြစ်သည်။
ယခုအမျိုးမျိုးပြန့်နှံ့နေသောဆေးဘက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုစုစည်းမျှဝေအသုံးပြု၍ထိရောက်သောဆေးကုသမှုပေးနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ထားသည်။ မကြာခဏဆေးရုံဆေးခန်းများသို့ မလာနိုင်သောသက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက် အဝေးမှ နည်းပညာဖြင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးရန်ရှိသည်။
လူဦးရေကျဆင်းမှုရလဒ်အနေဖြင့် လူဦးရေနည်းသောကျေးလက်ဒေသတွင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် e-commerce များအတွက်ယာဉ်မောင်းရှားပါးမှုကိုမမြင်တွေ့နိုင်သည်။
ဒါ့အပြင်မောင်းသူမဲ့truckကားများ drones များဖြင့် သိုလှောင်ဖြန့်ဖြူးရေးကဏ္ဍတွင်အသုံးပြုဖြေရှင်းနိုင်ရန်ရှိသည်။
လူဦးရေနည်းပါးသောကျေးလက်ဒေသများတွင်နေထိုင်သောသူများသည် အစားအသောက်ဝယ်ယူရန်နှင့်ဆေးရုံဆေးခန်းများသို့သွားရန် ဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲရှိသည်။ သို့သော်မောင်းသူမဲ့ယာဉ်များသည်အနာဂတ်တွင်ဖြေရှင်းပေးနိုင်သည်။ ဒါ့အပြင်လုပ်သားရှားပါးမှုပြဿနာအတွက်ပါဖြေရှင်းပေးနိုင်သည်။
ဂျပန်သည်အများပြည်သူလမ်းတံတားအခြေခံအဆောက်အအုံများလျင်မြန်စွာတိုးတက်ခဲ့ပြီး ထိုအဆောက်အအုံများကိုနေ့စဉ်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအပိုင်းတွင် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်နေသည်။
ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများ၊ဆည်များ၊လမ်းနှင့်တံတားများတွင်အာရုံခံကိရိယာများတပ်ဆင်ခြင်းအပြင် AI နှင့် Robots များအသုံးပြု၍ စစ်ဆေးထိန်းသိမ်းရန်ရှိသည်။
အာရုံခံကိရိယာများAI နှင့် Robots များကိုတပ်ဆင်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်သောနေရာများအစောလျင်သိရှိနိုင်သည်။ ဒါ့အပြင် လုပ်သားများမတော်တဆမှုများလျှော့ချနိုင်ပြီး လုပ်ငန်းအချိန်ပါလျှော့ကျစေသည်။
ဒါ့အပြင် ဘဏ်များတွင်လဲ နည်းပညာအသုံးပြုမှုအကန့်အသတ်နဲ့သာရှိခြင်းကြောင့် ငွေရေးကြေးရေးဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍသည် နှေးကွေးနေသည်။
Blockchain နည်းပညာကိုအသုံးပြု၍ငွေသား transfer လုပ်ခြင်း၊ နည်းပညာ company များ၏ အကူအညီဖြင့် app များမိတ်ဆက်ပေး၍ cashless အသုံးပြုမှုကိုဝန်ဆောင်မှုပေးရန်ဖြစ်သည်။
ပြည်ပငွေလွှဲလုပ်ငန်းတွင်လဲ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်နေခြင်းကြောင့် Blockchain နည်းပညာကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် အချိန်နှင့်ကုန်ကျမှုကိုသက်သာစေပြီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွါးရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ပါ လုံခြံုမှုရေးအာမခံချက်ရှိသည်။
Toyota ကတည်ဆောက်နေသည့် Woven city (smart city) ဆိုတာဘာလဲဘယ်လဲလူသားတွေအတွက်ဘယ်လောက်အကျိုးပြုနိုင်မလဲ?